RW Khayre: Booliisku waa in uu deg deg ah u fuliyaa go’aanada Maxkamadaha – Radio Muqdisho
RW Khayre: Booliisku waa in uu deg deg ah u fuliyaa go’aanada Maxkamadaha
Kulankaan oo ka qabsoomay xarunta taliska booliska Soomaaliyeed ayaa looga hadlayey horumarinta Garsoorka iyo Caadaaladda dalka iyo soo sare u qaadista kalsoonida shacabku ku qabaan fulinta go’aanadda Maxakamaddaha dalka.
Ra’iisul Wasaaraha Xukumamadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiyey kulankaan oo ka qayb galay Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yusuf Ahmed, madaxa laamaha cadaaladda, Garsoorka iyo booliska, waxana looga dooday hirgalinta hananka ku dhisan calaadda iyo dar-dar galinta fulita go’aanadda maxkmadda oo ay u xilsaaran yihiin Ciidanka booliska si loo soo xoojiiyo kalsoomida bulshada ay ku qabto Garsoorka.
Dhammaan xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa isku raacay in ay muhiim tahay in wax laga badalo qaabka hadda ay u shaqeeyaan Garsoorka iyo booliska oo ah fuliyaasha go’aanadda, laguna dabaqo barnaamijka isla xisaabtan , taas oo meesha ka saaraysa tuhunada shacabka ay ka qabeen hawlaha Cadaaldda iyo Garsoorka wadanka.
Ra’iisul Wasaraha Xukumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlay madaxa hay’adaha Garsoorka , Caadalada iyo Booliska ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay dagaal adag kula jirto musuq maasuqa, maamul xumadda , si taa loogu guuleystana ay laf dhabar u yihiin, helista Garsoor hufan iyo ciidan u diyaarsan fulinta go’aanadaas.
Taliyaha booliska Soomaaliyeed, sareeyo gaas, Bashir Cabdi Maxamed oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaan wax ka waydiiyey ahmiyada kulankaan maanta uu Ra’iisul Wasaarauhu la qaatay madaxa laamaha Garsoorka, iyo booliska.
Kulankan uu Ra’iisul Wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya uu la qaatay la qaatay madaxda, hay’addaha Garsoorka, Caaladda iyo sarakiisha ciidmada ayaa qayb ah qorshaha dar-dar galinta horumarinta Calaadda iyo Garsoorka tiir dhexaad u ah la dagaalanka musuqa mamusaqa oo ay dowladda Soomaaliyed maalmihii la soo dhaafay u soo xirtay howl-wadeenu iyo mas’uuliyiinta madax ka ahaa qaar ka mid ah wasaaradaha Xukumadda.
Guddiga doorashooyinka Qaranka oo ka hadlay kuraasta ka bannaan Golaha Shacabka